» कोरोना र मौसमी रुघाखोकी यसरि छुट्याउनुहोस….
२२ पुष २०७७, बुधबार १३:५८
काठमाण्डौ- जाडो महिनामा रुघाखोकी लाग्नु स्वभाविक हो। अहिलेको रुघाखोकी लागेपनि मानिसहरु तर्सिने अवस्था छ। किनभने अहिले कोरोना उत्कर्षमा पुगेको छ। यो अवस्थामा कोरोना कति समयसम्म रहला भन्न मुस्किल छ। तर, अबको केही हप्तासम्ममा पनि यो कम हुने सम्भावना निकै कम छ।
यदि कुनै मानिसलाई कोरोना लागेको छ भने सो मानिसमा रुघाखोकी देखिन सक्छ। तर, रुघाखोकी मात्र लाग्दा कोरोना नै लागेको हो वा अन्य फ्लूका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्ने कुरामा अन्योलता हुनसक्छ।
यस्तै, कोरोनाका कारण नभई मौसमका कारण रुघाखोकी लागेको भएपनि कोरोना हो कि भन्ने मनोविज्ञान रहने भयो।
सरकारले कोरोनाको पर्याप्त परीक्षण गर्न नसकिरहेका बेला मानिसहरु आफैँ सतर्क रहन आवश्यक छ। हामी चिकित्सकले भने कोही मानिस कोरोनाको शंका लागेर अस्पताल आउँदा उनीहरुलाई संक्रमितको सम्पर्कमा आएको वा नआएको?
यात्रा, कसैसँग एक मिटरको दूरी कायम नगरी १५ मिनेटभन्दा बढी कुराकानी भएको थियो कि ? लगायतका प्रश्न सोध्ने गरेका छौँ। यदि अस्पतालव आएको त्यो व्यक्तिले यस्ता क्रियाकलाप गरेको थियो र रुघाखोकी पनि लागेको छ भने अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्न सल्लाह दिन्छौँ।
यदि संक्रमितको सम्पर्कमा आउने कुनै पनि कार्य नगरेको भए परीक्षण गर्नैपर्ने सल्लाह त दिँदैनौँ तर आफूले जानेर परीक्षण गरे उपयुक्त हुन्छ। कोरोना र मौसमी रुघाखोकी छुट्याउने अर्को सजिलो तरिका भनेको सुँघ्ने शक्ति (गन्ध) र स्वाद थाहा पाउने क्षमता दुवै कमजोर भयो भने कोरोनाको सम्भावना बढी हुन्छ। यस्तो भएमा जो कोही पनि परीक्षणका लागि अस्पताल जानुपर्छ।
कोरोना र मौसमी फ्लूबाट बच्ने तरिका लगभग उस्तै भएकाले मानिसहरुले बच्ने उपाय राम्ररी अपनाउने हो भने दुवैबाट बच्न सकिन्छ। साथै, कोरोना र फ्लू फैलिने तरिका पनि उस्तै भएकाले सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। कोरोनाको खोप अहिलेसम्म नबने पनि फ्लूको भने खोप पाइने भएकाले यसबाट बच्न प्रत्येक वर्ष सबैले खोप लगाउनु पर्छ।
अहिले टेकु अस्पतालमा पनि मानिसको भिड बढेको छ। दैनिक पाँच सयभन्दा बढी मानिस कोरोना परीक्षणका लागि आइरहेका छन्। उनीहरु मध्ये धेरै जसो मानिस कामको सिलसिलामा तराईबाट आएका र घरबेटीले कोरोना परीक्षण गरेर मात्र आउनु भनेको भएर आएका छन्।
तर, जाडो मौसम सुरु भएपछि भने कोरोनाकै शंका लागेर परीक्षण गर्न आउने मानिसको संख्या वृद्धि हुने सम्भावना बढी छ।